Njengoba leli gama lisikisela, lymphadenitis - isifo okuyinto sivezwe kula ukuvuvukala-lymph. Ochwepheshe uhlukanise ke ngezizathu eziningana: ubunjalo ukugeleza futhi nesayithi libe ukuvuvukala. Nokho, kuzo zonke ukwelashwa ezimweni lymphadenitis kudinga olunzulu futhi ngamabomu, ukuze ugweme nemiphumela emibi ngendlela efanayo.
Imbangela sifo, ngokuvamile kakhulu ukutheleleka, okuyinto emzimbeni, noma ukuvuvukala. Ngakho, kungenzeka ukuthi uhlobo lymphadenitis ethize okubangelwa izifo ezinkulu, njengesifo sofuba, ugcunsula, trichomoniasis, nabanye. Ukwelashwa kulokhu akuyona kuphela kudingekile abavusa lymph node, kodwa futhi izizathu ngalo ilokhu.
Ngokuvamile izinqubo ukuvuvukala kule yiziphi izinhlaka futhi kuholela ekwandeni amayunithi, umphimbo ikakhulu obuhlungu, umkhuhlane, namathansela, ngisho nokubola kwamazinyo kungathikameza ukukhula ka lymphadenitis wesibeletho. Ezimweni eziningi, ukususwa lymph node ngesikhathi ukutheleleka bebodwa ekugcineni bounce back.
Ngaphambi ikhambi lymphadenitis, ezidingekayo ukuze umuntu uzokwazi ngokunembile (ngosizo imiphumela yokuhlolwa) ukunquma yimbangela nokuvuvukala, futhi ngokufanele ukwabela ukwelashwa okufanele. Uma esikhathini esizayo esiseduze akukho ithuba lokuvakashela onguchwepheshe, ungasebenzisa ibhodi sosizo lokuqala uma ukugula, futhi babiza elikhanyayo ezindaweni ice. Kubalulekile nokukhumbula ukuthi kunoma yisiphi isimo idatha akuyona indawo sekuqala ukufudumala, hhayi onikezwe kubo cindezela esishisayo, kungenjalo ungathola eziyingozi, futhi lesi sifo uzoqhubeka ukuba bathuthuke.
Lesi sifo ubhekwa non-ethize uma ISIZINDA lymph abavusa ngqo nabo ukutheleleka kwabo. Uma othile ukwelashwa lymphadenitis, njengoba enjalo, akudingi neqhaza elikhulu wathumela ukulwa co-nemidlezane, nakho ukuba lesi simo-ke ifomu-non-ethize, kungase kudingeke inkambo yokwelapha.
Izinkinga lesi sifo kungaba ubomvu kumiswa ezindaweni elikhanyayo ezibangela, iningi amacala, staphylococci futhi streptococci. Uma isiguli uya kudokotela ngendlela efanele usaqala, kuyoba kungenzeka ukwenza kuphela izindlela olandelanayo, imithi kanye Physiotherapy. Uma kungenjalo, ungase udinge ukuhlinzwa ukhishwe ubomvu.
Ukuze ukwelashwa lymphadenitis ke kwenziwa ngendlela efanele, kungenzeka ukwabela uchwepheshe hhayi kuphela cwaningo ezengeziwe zokubona umthombo ukutheleleka, kodwa futhi ultrasound. Kwezinye izimo, kungase kudingeke ukuba uthathe imithi elwa namagciwane, i-aphoyntimenti bese ukwelashwa okufanele kwenzeke ngaphansi kokuqondisa onguchwepheshe. Ezigabeni zokuqala, uma kungekhona yakha ubomvu esimisiwe wamafutha (ihtiolovaya, Vishnevsky, njll) ukusheshisa nokuvuthwa we focus ukuvuvukala endaweni obuhlungu.
Akubuzwa, lymphadenitis, ogama ukuphathwa isabelo ngesikhathi esifanele futhi silungise noma iziphi izinkinga ezingase zivele ayisho uya pretty masinyane. Uma ukuvuvukala kubangelwa ukutheleleka elise umzimba, kuyafaneleka ukunaka kwakhe.
Ngokuba nokuvimbela ukuvuvukala lymph node Kunconywa ukuba agweme amagciwane ukuqinisa amasosha omzimba. Endabeni izifo ukuvuvukala zidinga ukwelashwa kwabo ngempumelelo futhi ifike ngesikhathi. Noma yimuphi umuntu elimele noma ukulimala kumele kusetshenzwe isinqandakuvunda ukuze avimbele izifo engena emzimbeni. Kufanele kukhunjulwe ukuthi lymphadenitis, ukwelashwa kanye nokuvimbela okuyinto akunzima kangako, ikakhulukazi kusaqalwa, isifo kunalokho ezingemnandi angakhula abe ifomu esingamahlalakhona noma ukunikeza eziyingozi emzimbeni.
Leso siphuzo nge ukudla okunobuthi kanye notshwala?
Pumps ngoba indle efulethini. Izinhlobo kanye nezici Ukukhetha
Ikhalenda likaGregory: Indaba umsuka kanye main izici
Oatmeal phezu kwamanzi